Shan Calaamadood Oo Aad Ku Garan Karto Inaad Haaysato Saaxiibtinimo Waarto.. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: October 12, 2017, 7:56 pm
Qormadan oo uu Kobciye ka soo xigtay shabakadda wararka ee Alcarabiya waxa aynu ku eegaynaa qaar ka mid ah halbeegyada ay xeeldheerayaasha cilmiga bulshadu aaminsan yihiin in lagu dhererin karo saaxiibtinimada si loo kala garto midda danta ku dhisan iyo saaxiibtinimada waarta ee runta ah. waayo waxa inta badan dadka ka qaldama marka xidhiidhka u dhexeeyaa uu saaxiibtinimo gaadhayo iyo marka kale. Waxaa muhiim ah in qofku uu kala garto saaxiibka, Jaalka, Rafiiqa, Kooxda, Deriska, garashada iwm.
In wixii laga midaysan yahay la wadaago, wixii lagu kala aragti duwan yahayna la isku ixtiraamo
Run iyo hadal la isu saafo
Saaxiibka runta ahi waa ka cabashadiisa iyo walaaca uu qababo si ixtiraam badan kuugu sheegi kara, marka uu arko in aad jid qaldan martayna gacanta ku soo qabanaya isaga oo aan dhaawacin sharaftaada. In aad hesho ruux ku dhegeysanaya, danaynaya sharaftaada iyo wanaagga mustaqbalkaaga, isla markaana ku siinaya fursad aad go’aan sax ah ku qaadan karto, waa calaamad kuu sheegaysa in uu yahay saaxiibka runta ah ee aad u baahan tahay.
Saaxiibka wanaagsani waxa uu waqti geliyaa in uu fahmo am aka garaabo duruufaha ku xeeran saaxiibkii, in uu dadaal badan geliyo taageeridda mawqifyada uu saaxiibkii qaato ee uu og yahay in aanu ku qaldanayn ama cawaaqib xun keenayn. Xitaa haddii dadka oo dhami ka soo horjeestaanna isagu waa uu ku garab istaagaa go’aankaas.
Saacadaha ugu fiican ee qofku maraa waa kuwa uu la qaato saaxiibbadii, gaar ahaan marka kulanku uu yahay mid aan sii qorshaysnayn. Saaxiibka wanaagsani waa ka u boholyooba agjoogga saaxiibkii, in uu arko iyo in uu la fadhiyaana deeqdo.